Community of Catholic Nuns Providing Solace to Displaced Persons in Mozambique
The Immaculate Heart of Mary House in the Catholic Parish of Cerâmica of Mozambique’s Lichinga Diocese has become “a meeting point” for displaced people in the Southern African country.
Tropical Storm Ana “another great disaster”, Catholic Bishop in Mozambique Says
The tropical storm, which has been crossing the Northern region of Mozambique since the early hours of Monday, January 24 is “another great disaster” to the Southern African country that has suffered numerous weather disasters in the past, a Catholic Bishop in the country has said.
Catholic Peace Foundation Disputes Reported Gains against Militants in Mozambique
The leadership of the Catholic peace foundation, Denis Hurley Peace Institute (DHPI), has faulted reports that the Rwandan and Mozambican forces have stopped the operations of terrorists in Mozambique’s Cabo Delgado Province.
Catholic Charity Rallying for Funds to Construct Church in Northern Mozambique
Catholic Pontifical and charity foundation, Aid to the Church in Need (ACN) United States, has sent out an appeal for help to construct a Church in Northern Mozambique to accommodate refugees who are arriving in the region in large numbers.
Traumatized Mozambicans Not Receiving Adequate Psychosocial Attention, IMBISA Official
Displaced people who have undergone traumatic experiences in the embattled Cabo Delgado Province in Northern Mozambique are not receiving enough psychosocial support as attention is given to their other needs such as food and shelter, the Director of the Inter-Regional Meeting of the Bishops of Southern Africa (IMBISA) Secretariat has said.
The Catholic Church in Mozambique has written to the Pontifical charity foundation, Aid to the Church in Need (ACN) Portugal, requesting for help to renovate Mozambique’s first Catholic Seminary that was ruined in the country’s 1977 civil war.
Catholic Charity Fundraising to Support Victims of Violence in Nigeria, Mozambique
Pontifical and charity foundation, Aid to the Church in Need (ACN) Italy, has approved two major projects that seek to abate the humanitarian crisis in Nigeria and Mozambique where insurgents have displaced locals from their homes.
Catholic Peace Foundation Raises Alarm over Extrajudicial Killings in Mozambique
Catholic peace and charity foundation, Denis Hurley Peace Institute (DHPI), which is researching the evolution of violence in Mozambique has reported about extra-judicial killings of people suspected to be insurgents in the Southern African country.
Mozambique’s President Mourns Cardinal Who “stood out for commitment to good of humanity”
The President of Mozambique has eulogized the country’s first Cardinal as a Catholic Church leader who was committed to the welfare of humanity.